Somaliland: Guddoomiyaha KULMIYE Iyo Wasiiradda Maalliyada Oo Markii U Horeysay Iska Laab Xaadh-dhey Uur-ku-taallooyin Loo Wada Joogay Sababtooda Iyo Lafo-gurka Qoddobo Kalsooni Dhaliyey Oo Laysla Meel-dhigay - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Guddoomiyaha KULMIYE Iyo Wasiiradda Maalliyada Oo Markii U Horeysay Iska Laab...
Wasiir Ka Tirsan Xukuumadda Oo Lib Ka Mutaystay Odayeyn Uu Isu Xilqaamay Oo Ka Ergaysay Isu Soo Dhawaynta Labadan Mas’uul
Waxaa Uu Wasiiradda Ku Tilmaamay Shakhsiyad Aan Sinnaba Looga Maarmi Karin Taageerradeeda, Halka Guddoomiyaha KULMIYE-na Loogu Bushaareeyey Hiil Farxad Geliyey Geediga Doorashada
Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE, ahna musharraxa jagada madaxweynenimo ee xisbigaas Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka wasaaradda Maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan, ayaa yeeshay kulan hoose oo isku laab xaadhanayeen, waxana labada masuul kulankoodaas ku lafo gureen sidii ay u dardargelin lahaayeen ka wada shaqaynta hawlaha qaranka iyo kuwa xisbigaba. Kulankan oo ka dhacay xarunta wasaaradda warfaafinta, ayaa sida xogaha Wargeyska Hubaal kasoo gaadhay sheegayaan in labada masuul gebi ahaanba meesha kaga saareen warar shaki gelinayey wada-shaqayntooda iyo is aaminaadooda, isla-markaana meesha kaga saareen waxkasta oo keeni kara inay siyaasadda ku kala aragti duwanaadaan. Labadan masuul waxa ay sidoo kale kulankooda diiradda ku saareen sidii loo dardargelin lahaa hawlaha xisbiga, waxana la isku raacay in si wada jir ah la iskaga kaashado dhammaanba wixii horumarinta qaranka la xidhiidha, isla-markaana meesha looga saaro dhammaanba wararka ku-tidhi ku-teenta ah ee lagu sheegayey in masuuliyiintani siyaasadda ku kala irdhoobeen. Waxa sidoo kale Guddoomiye Muuse Biixi iyo wasiir Samsam si hufan iskugu afgarteen in wixii xagga aragtida siyaasadda ee hore loogu kala duwanaa meesha laga saaro, isla-markaana loo diyaar garoobo sidii guddoomiyaha looga saacidi lahaa gaadhitaanka hankiisa madaxweynenimo ee uu musharraxa u yahay. Sidoo kale waxa ay masuuliyiintani is xasuusiyeen inay kamd yihiin aasaasayaashii muruqa, maskaxda iyo maalkaba soo geliyey xisbiga talada haya ee Kulmiye, iyagoo si hufan isu hogo tusaaleeyey in baahi loo qabo sidii loosii wadi lahaa ka midho dhalinta juhdigii labadan masuul soo geliyeen Xisbigaas. Marwo Samsam, ayaa dhankeeda guddoomiyaha u caddaysay inay ka go’an tahay sidii ay qabteeda uga qaadan lahayd dedaalka uu guddoomiye Muuse Biixi ugu jiro madaxtinimada waddanka, waxana ay guddoomiyaha u sheegtay inuu si xooggan ugu xisaabtamo taageeradeeda. Samsam Cabdi Aadan, ayaa sidoo kale guddoomiye Muuse ugu bushaaraysay inuu niyaddiisa ka buuxsado taageeradeeda, isla-markaana ay kaalinta koowaad kaga jirto dadka hiilka iyo hoodaba la garab taagan, waxana ay hoosta ka xarriiqday inaanu jirin cid ay shakhsi ahaan ka jeceshay inuu guddoomiyuhu gaadho hankiisa siyaasadeed. Guddoomiye Muuse ayaa dhankiisa farxad iyo rayn-rayn kaga falceliyey sida ay isku laab xaadheen wasiirka Maaliyadda, waxana uu sheegay inay marwo Samsam kamid tahay dadka uu sida weyn taageeradooda ugu xisaabtamo mar walba. Sida oo kale waxa uu guddoomiye Muuse Marwo Samsam ku tilmaamay shakhsi aan sinaba taageeradeeda looga maarmi Karin, isla-markaana saamayn ballaadhan ku dhex leh xisbiga Kulmiye iyo xukuumaddiisaba, waxana uu xusay inuu aaminsan yahay inay qaybteeda ka qaadan karto ka midho hammigiisa siyaasadeed.
Labadan masuul ayaa in muddo ah kulankoodii ugu horreeyey ee fool ka-fool ah yeeshay, waxana tallaabadani meesha ka saaraysaa warar aan sal iyo raad lahayn oo maalmihii ugu dambeeyey masuuliyiintan laga baahinayey.
Somaliland: Faysal Cali Waraabe Oo Dib U Soo Celiyay Xubintii UCID Ee Guddiga Doorashada Iska Casilay Iyo Cabdiraxmaan-Cirro Oo La Filayo Inuu Soo Magacaabo Xubintii Waddani
Somaliland: Somaliland Oo U Jawaabtey Hadalkii Puntland Ka Soo Yeedhay
Deg Deg: Ciidamada Booliska Gobalka Sool Oo Toogtay Xildhibaan Ka Mid Ah Somaliland + Xaaladiisa Caafimaad + Cida Ka Danbeysay
Deg Deg: Wasiir Fartoon Oo Gaadhay Deegaanka Dharkayn Geenyo Iyo Jawiga Xolaadad Oo Ka Soo Ifbaxay Gobalka Sool Iyo Ujeedad Socdaalkiisa